Flim2MM: The Ides of March (2011)
အမေရိကန်နိုင်ငံရေးလောကကို နောက်ခံထားပြီး တင် ဆက်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားကို ဂျော့ရှ် ကလူနီကကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးပြီး ကိုယ်တိုင်ပါဝင်သရုပ်ဆောင် ခဲ့ပါတယ်။
ဇာတ်ကားရဲ့ ကျောရိုးက ၂၀ဝ၈ခုနှစ်မှာ တင်ဆက်ခဲ့ တဲ့ ပြဇာတ်ကို အခြေခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။Farragut Northဆိုတဲ့ ပြဇာတ်ဖြစ်ပြီး ဗျူဝီလီမွန်က ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ Farragut North ဆိုတာ ဝါရှင်တန်မှာရှိတဲ့ မြေအောက် ဘူတာရုံတစ်ရုံရဲ့ နာမည်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပြဇာတ်ကို စတင် ကပြချိန်မှာ ဝေဖန်ရေးသမားတွေဆီ ကမောက်ကမမှတ်ချက် တွေ ရခဲ့ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေဆီကတော့ နွေးထွေးတဲ့လက် ခံမှုကို ရခဲ့ပါတယ်။ ခေတ်ပြိုင်ရှုခင်းတွေထဲက မာန်မာနထောင်လွှားမှုတွေ၊ အာဏာကို တက်မက်မှုတွေနဲ့ ဒါတွေကို တောင့်ခံနိုင်သူတွေကို ဂုဏ်ပြုလိုခြင်း ရည်ရွယ်ချက်က ပြ ဇာတ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀ဝ၈ခုနှစ်အချိန် နဲ့ တိုက်ဆိုင်ပြီး ဒီပြဇာတ်ကို ဘရော့ဒ်ဝေးမှာတင်ဆက်ခဲ့ပါ တယ်။ အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲစတင်နေချိန်မှာတင် ဆက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပြဇာတ်ကို ဂျော့ရ်ှကလူနီက ရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့ ဝယ်ယူခဲ့ ပါတယ်။ ငွေကြေးရင်းနှီးမှုအပိုင်းမှာလီယိုနာဒိုလည်း ပါဝင် ခဲ့ပါတယ်။ ဇာတ်ကားရိုက်ကူးချိန်မှာတော့ ဇာတ်ညွှန်းကို ကလူနီကိုယ်တိုင်ရေးပြီး ရိုက်ကူးခဲ့ပါပြီ။ ရွိင်ယန်ဂေါစလင်း ကို အဓိကသရုပ်ဆောင်နေရာက ထားခဲ့ပါတယ်။ ကလူနီ ကတော့ ဂေါစလင်းနဲ့အပြိုင်ဇာတ်ရုပ်နေရာ က ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဝင်နဲ့ အထက် လွှတ်တော်အမတ်နှစ်ဦးရဲ့ သမ္မတရွေးကောက်ပွဲအကြို အားပြိုင်မှုက ဇာတ်လမ်းကျောရိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနှစ်ဦးရဲ့ အားပြိုင်မှုမှာ ပရိသတ်ရှေ့ မဲဆွယ်စည်းရုံးတာတွေရဲ့ နောက်ကွယ်က ကိစ္စရပ်ပါလာခဲ့ပါတယ်။ ရိုးသားမှု၊ ဖြောင့် မတ်မှု စတဲ့ အချက်တွေကို မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ တာဖြစ်ပေမဲ့ နိုင်ငံရေးမှာ မက်ခီယာဗယ် လီယန်နည်းသုံးလာပြီဆိုရင် ရက်စက်မှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကို ဆက်ပြီးပြသ ခဲ့ပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းကျောရိုးအရတော့ ဇာတ်ကောင်တစ်ဦးက သူ့ရဲ့အရှုပ်တော် ပုံကို မပေါ်စေဖို့ အပြစ်မဲ့သူတစ်ဦးကို နှုတ် ပိတ်ခဲ့ပါတယ်။ အများအမြင်မှာတော့ သူဟာ ဂုဏ်သိက္ခာရှိသူဖြစ်ပြီးရွေးကောက်ပွဲ မှာအနိုင်ရဖို့ ကျိန်းသေသလောက်ရှိနေတဲ့ သူဖြစ်ပါတယ်။
သူပြောတဲ့စကား၊ သူပေး နေတဲ့ကတိ၊ သူယုံကြည်ရာခံယူချက် စတဲ့ အကြောင်းအရာတွေဟာ လူအများနှစ်ခြိုက် လက်ခံနေကြပါတယ်။ သူ့ရဲ့လုပ်ရပ်အမှန်၊ ခံယူချက်နဲ့ စိတ်သဘောထားကို သိသွားသူ တစ်ဦးက တစ်ယောက်ပဲ ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒီဇာတ်ကားဖော်ပြခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာ တွေက ဖြစ်ရပ် မှန်တွေဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ ဇာတ်ကားဖန်တီး သူတွေက ဇာတ်ကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ထုတ်ဖော် ပြောဆိုခဲ့တာမျိုးတော့ မရှိပါဘူး။
[FORMAT]:…………………….….:) 640p DVDRip x264 MP4
[GENRE]:………………………… .:) Drama, Romance
[FILE SIZE]:……………………….:) 660 MB
[RELEASE RUNTIME]:………….:) 1h 41mins
Posted by Y Junction at 6:42:00 PM
Labels: Drama, Hollywood